HomeLocalVast acquires 23.75% economic interest in Eureka g...
Vast acquires 23.75% economic interest in Eureka gold mine
Aim-listed Vast Resources’ 25%-owned group company Dallaglio Investments has acquired a 95% interest in the Eureka gold mine, in Zimbabwe.
SSGI has an effective 24.99% interest in Dallaglio and, therefore, funding for the acquisition has been sourced by Vast’s associated entities in Zimbabwe without recourse to Vast.
“We are extremely pleased to announce the first new acquisition together with our strategic partners in Zimbabwe for many years. This demonstrates our continued belief in Zimbabwe and the ability to find robust assets to add to the Vast portfolio,” said Vast CEO Andrew Prelea.
ZCDC offer for Mujuru mine ridiculous – Rani...